1. I-salmon mhlawumbe isithako esilungele ukusetshenziswa kakhulu. Isithombo esisha salmon Kukhona isiqandisi esihlanganiswe nayo esidlweni sakusihlwa. Noma isidlo sasemini esimnandi kalula Futhi kungasetshenziselwa ukupheka izitsha ezahlukahlukene futhi Ake sibheke indlela yokwenza i-salmon elula, umama wekhaya noma umpheki oqalayo. Ngingakwenza ngokukhululeka
2. Ungazilungiselela kanjani kalula ngaphambi kokwenza
3. Okokuqala, imishini kufanele ilungele. Ukuze uphathe okujwayelekile kuya kwesikhulu semifino salmon Kufanele ulungele ukuthenga i-spatula enkulu kancane kunokujwayelekile. Yenze ibe nkulu ngangokunokwenzeka. Ungayikhetha kanjani, cabanga lokho Kumele kube yisiponji esikwazi ukuphakamisa futhi siphendule inyama eningi epanini. Futhi izibopho zezinhlanzi zingaqoqwa noma zidluliselwe emapuletini alungiswe kahle. Noma uma kungcono Ukuthenga i-spatula yokubamba izinhlanzi Ngokukhethekile eyenzelwe le njongo, empeleni kuyisinqumo esihle kakhulu.
4. Kamuva, ngafuna "ipani lensimbi" elifanele ukubulawa. Bese uyifaka kuhhavini. Ikhwalithi ye-None Stick Stick nayo ithathwa njengevumelekile. Funa eyodwa engangena kuhhavini oshisayo. Futhi enye inketho enhle yipani lokuthosa elinepuleti eliqinisiwe. Qiniseka ukuthi insimbi yepani ayisontiwe, ayigobile. Lapho ivezwa ekushiseni okuphezulu kuhhavini Futhi uhlobo lwe-wavy (esithombeni) nalo lufanele ukugcotshwa.
5. Lokho kungenye ebaluleke kakhulu. Izimpintshisi zenaliti ezincane (Lokho kubukeka njengezimbiwa) kungasetshenziswa ukukhipha ithambo lephini lenhlanzi. Khetha usayizi ofanele, ohlala njalo, ikhwalithi kufanele ibe ehamba phambili. Ngoba amathambo esikhonkwane salmon aqinile kakhulu Futhi ukukhipha amathambo kufanele kucoceke Ukuthola ukuthungwa okuhle futhi
6. Into yokugcina ukulungiselela iphepha lesikhumba noma ucwecwe lwe-aluminium. Ukuzisebenzisela izihlwathi zezinhlanzi esizokufaka kuhhavini (fish en papillote) kanye ne-pan pan grill grill.
7. Ama-Pinbones ukususwa kwe-salmon.
8. Beka izibopho zesalmon ebhodini. Ibhodi elikhulu lokusika Noma ungayibeka kucwecwe lokubala ekhishini. Isakhiwo sithi Beka isikhumba sibheke phansi. (Ngisho nangaphandle kwesikhumba) bese usebenzisa isandla sakho ukuthinta ithambo elincanyana eliphumayo ukuze ubone ukuthi likuphi. Bese kuqala emaphethelweni obukhulu benyama Ngokusebenzisa impintshisi yenaliti ukuze ubambe ukuphela kwethambo ngokuqinile futhi ulikhiphe.
9. Ukupheka i-salmon ku-stovetop kuyindlela elula. Uma ungenayo noma ungafuni ukusebenzisa i-ovini Ngokuqondene nenqubo yokupheka, kufaka phakathi UKUPHEPHA NOKUPHEPHA.
10. UKUSAZA ISALONI Sautéing, ukuthosa okusheshayo ngokuguqula izinhlanzi amahlandla ama-1-2 usebenzisa ukushisa okuphezulu Le ndlela ilula futhi iyashesha ukupheka. Indlela yokukwenza imi ngale ndlela elandelayo
11. Hlanganisa isipuni esingu-1 sebhotela epanini elingaphezu komlilo ophakathi. Linda ibhotela liwe bese uvula inani eliphelele legolide, cishe imizuzu emithathu.
12. Fafaza usawoti kanye nopelepele epanini, linda imizuzu engu-6 kuze kube yilapho inhlanzi iphenduka ibe pink ukuba nsundu. Bese uvula izinhlanzi Ngakwesobunxele epanini (Musa ukubuyisa izinhlanzi emuva naphambili) Linda kuze kuphekwe ukunambitha, eminye imizuzu emi-2 kuye kwengu-4.
13. UKUFUNA ubuzingeli kuyisalmoni ebilisiwe ezokunikeza umbala ophekwe ngokuphelele futhi muhle. Futhi kuyindlela enhle yokwenza izinhlanzi ziphekwe ngokuphelele ngaphandle kwamafutha. Izindlela eziyisisekelo zingokulandelayo.
14. Faka imicu yezinhlanzi epanini. Bese ufaka amanzi epanini ngokwanele ukumboza umucu wezinhlanzi Okulandelayo, ufafaze usawoti, upelepele ne-bay leaf (i-cardamom).
15. Yima kancane futhi ngokushesha, bese ucisha umlilo, umboze ipani bese uvumela izinhlanzi zipheke. Kuthatha cishe imizuzu engama-20-30. * Kulokhu, isalmon ekhethiwe kufanele ibe maphakathi nobukhulu ngokwanele.